China Laydown Lighting Towers KLT-8000 LED manufacturers na ndị na-eweta ya Chawapụrụ
Nbudata ụgbọ ala na-ebudata ma budata ụlọ elu ọkụ ekwentị mkpanaka LB6180E- K
Ụlọ elu ọkụ ọkụ KLT-8000
Nnukwu ọkụ ọkụ ụlọ elu KLT-6500
Ụlọ elu ọkụ ọkụ KLT-10000 Hydraulic Foldable Laydown Lighting Towers
Ụgbọ elu ọkụ kwụ ọtọ Hydraulic KLT-10000V
Ụlọ elu ọkụ ọkụ KLT-8000 LED
Ọkụ LED/mast ntuziaka
Maka nhazi saịtị ngwa ngwa yana obere oge, ihe ọkụ ọ bụla nwere ike iji aka ya mee ihe na-ejighị ngwaọrụ-ihe ndozi ahụ na-anọkwa n'otu ebe. Họrọ ọkụ ọkụ ma ọ bụ ọkụ ọkụ ọkụ mgbe ị na -akọwa ụlọ elu ọkụ gị. Mgbakwụnye ọkụ ọkụ ụlọ ọkụ na-enwu enwu bụ nke na-enwu enwu na ụlọ elu ọkụ ọ bụla nwere ike ibugharị, na ihe nrụnye ihe nchara nke Brighters na-egosipụta ihe ngosi parabolic dị elu nke na-abawanye ọkụ. Ọkụ ọkụ ọkụ dịkwa.
Nrụnye ọkụ ọkụ dị elu
Ụlọ elu telescoping na -agbagharị ihe ruru ogo 360
Ọtụtụ nhọrọ injin dị ala
Nnukwu nlele ahụ niile nwere nchara
Nnweta injin na -egbochibeghị
Ọ bụghị naanị ụlọ elu ọzọ na-enwu ọkụ, ụlọ ọkụ na-enwu ọkụ na-eji teknụzụ ọgbara ọhụrụ maka ọkụ dị elu, na-enwu otu ụdị ọkụ n'ofe ọrụ niile yana gafere ụkpụrụ gọọmentị maka ọkụ ọrụ.
Ụlọ elu telescoping na -anọ na ntukwasi obi n'ime ebe ụmụaka na -eme njem mgbe ọ kwụ n'ahịrị, wee gbatịa kwụ ọtọ ruo 30 ụkwụ mgbe a na -ebugharị ya. Winch abụọ na -ewelite ma na -agbatị ụlọ elu ahụ n'ụzọ dị mfe. Mpempe akwụkwọ ntuziaka bụ ọkọlọtọ na winches ike bụ nhọrọ.
Nhọrọ nke injin mmanụ dizel na ndị na-emepụta pole anọ na-ahụ na arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya. Igwe na-arụ ọrụ nke ọma na
30-galọn mmanụ ọkụ na-enye oge ịgba ọsọ n'etiti mmanụ ọkụ-ruo awa 120 yana ọkụ ọkụ pụrụ iche nke ọkụ ọkụ. Nhọrọ nkwalite arụmọrụ gụnyere sistemu mmalite/nkwụsị nke mgbede na-amalite n'ụtụtụ na ngwugwu mmalite ihu igwe oyi.
Maka mmezi sistemu, ndị otu Brighters nwere oghere pụrụ iche na -enye ohere na -enweghị nsogbu na injin, jenerato na ngwa eletriki. Ogwe akụrụngwa bụ kabinet nwere nchara nwere mkpọda nwere ọnụ ụzọ nku nwere ike imechi emechi iji chebe pụọ na ịnweta ikike n'enweghị ikike.
Ụlọ elu ọkụ na-enwu enwu nke na-anya isi na-arụ ọrụ na-enweghị nsogbu yana ogologo ndụ pụrụiche-njirimara nke akara ọkụ.
Ọ bụghị naanị ụlọ elu ọzọ na-enwu ọkụ, ụlọ ọkụ na-enwu enwu, na-eji teknụzụ ọgbara ọhụrụ maka ọkụ ọkụ dị elu, na-enwu otu ụdị ọkụ n'ofe ọrụ niile yana gafere ụkpụrụ gọọmentị maka ọkụ na-arụ ọrụ. Enwere ike iji ihe nrịba ọkụ nke ọ bụla nwere onwe ya na-ejighị ngwa-ihe ndozi ahụ na-anọkwa otu ebe. Họrọ ọkụ ọkụ ma ọ bụ ọkụ ọkụ ọkụ mgbe ị na -akọwa ụlọ elu ọkụ gị. Mgbakwụnye ọkụ ọkụ ụlọ ọkụ na-enwu enwu bụ nke na-enwu enwu na ụlọ elu ọkụ ọ bụla na-ebugharị ebugharị, na ihe nrụpụta ihe nchara nke Brighters na-egosipụta ihe ngosi parabolic dị elu nke na-abawanye ọkụ. A na -enwukwa ọkụ balloon Ụlọ elu telescoping na -anọ na ntukwasi obi n'ime ebe ụmụaka na -eme njem mgbe ọ kwụ n'ahịrị, wee gbasaa kwụ ọtọ ruo 30 ụkwụ mgbe a na -ebugharị ya Mgbe ụlọ elu ahụ na -agbagharị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ogo 360 na ọkụ na -arụ ọrụ n'ogo ọ bụla, na -ewepụ mkpa ọ dị ịkwaga. ụgbọala na -adọkpụ ugboro ugboro. Winch abụọ na -ebuli elu ma na -agbatị ụlọ elu ahụ n'ụzọ dị mfe. Mpempe akwụkwọ ntuziaka bụ ọkọlọtọ na winches ike bụ nhọrọ Nhọrọ nke injin dizel ụlọ mmepụta ihe na ndị na-emepụta pole anọ na-ahụ na arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya. Igwe na-arụ ọrụ nke ọma na
Ogwe mmanụ ọkụ nke nwere galọn 31 na-enye oge ịgba ọsọ n'etiti mmanụ-ihe ruru awa 120 na ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ pụrụ iche nke ọkụ ọkụ. Nhọrọ nkwalite arụmọrụ gụnyere sistemu mmalite/nkwụsị nke mgbede ruo ụtụtụ, yana ngwungwu mmalite ihu igwe maka mmezi sistemụ, Brighters nwere oghere pụrụ iche na-enye ohere na-enweghị nsogbu na injin, jenerato na ngwa eletriki. Ogwe akụrụngwa bụ kọbọd kpụrụ akpụ nke nwere ọnụ ụzọ nwere nku nwere ike imechi emechi ka ọ ghara ị nweta ohere na-enwetaghị ikike Brighter Laydown Light Towers na-anya isi na enweghị nsogbu yana ọpụrụiche ogologo-ihe ngosi nke akara ọkụ.
Nkowa dị mkpirikpi
Ejiri akara ukwu 127 × 112in. (321 × 288cm), L × W.
Ogo ọrụ Max.30ft (9.14m)
Ibu Ihe dị ka ọrụ. 1800lb (815kg)
Shippin dị ihe dịka 1550lb (703kg)
Ọkụ 480-watt LEDs Ọkụ ọkụ 350-watt Ngwongwo metal
Oriọna Ngwaọrụ 480W anọ Ntọala 350W anọ Oriọna 1000W anọ
Ìhè 57,800lm kwa elekere 49,000lm kwa elekere 110,000lm n'otu oriọna
Ngụkọta 231,200lm Mkpokọta 196,000lm 440,000lm ngụkọta
Ụdị njin Tier 4 diesel ikpeazụ, 3-cylinder, 4-cycle
Ọsọ moto 1800rpm@60Hz ma ọ bụ 1500rpm@50Hz
Igwe na -enye ọkụ Enweghị ntụpọ, klaasị H
Ọkwa ụda 70dB@23tf (7m) na max.load
Batrị 12Vdc, 550CCA
Oke ike mmepụta 9.8kw 11.5 kw 9.1kw
Nwepu 1001cm³ 1123cm³ 1028 sentimita
Ike mmanụ ụgbọala 114l 114l 114l
480-watt LEDs Ọkụ ọkụ 350-watt Ngwongwo metal
Mmanụ ụgbọala oriri 1.17L/h 0.096L/h 1.86L/h
Runtime betore mmanu mmanu Ihe dị ka elekere 97 Ihe dị ka elekere 120 Ihe dị ka elekere 62
Mmepụta 6kW ma ọ bụ 8kW
Ugboro 60Hz ma ọ bụ 50Hz
Iwu voltaji ± 6%, enweghị ibu zuru oke
Nke gara aga: Ụlọ elu ọkụ ọkụ KLT-8000
Osote: Igwe ọkụ ọkụ ọkụ na-ebugharị ngwa ngwa Kwadoro site na Solar Energy na Wind Energy KLT-Hybrid
Ọnụahịa Tower Lighting Mobile
Ụlọ Elu Anyanwụ
Nata ozi oge -oge site na Brighter.